Thu, Apr 19, 2018 | 23:25:42 NST
14:49 PM ( 10 months ago )
Total Views: 30.5 K
– प्रहरी नायव निरीक्षक गोपाल शर्मा
२२ वर्षे प्रहरी सेवामा बिभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निभाईयो । आफ्नो भूमिका निभाउने क्रममा म स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावको सुरक्षाका लागि जाजरकोटबाट दाङ पुगेँ । मेरा कमाण्डरमा खटिएको प्रहरी टोलीको एक हवल्दारले बम समातेका थिए । उनको हाइ–हाई भयो । हुनु पनि पर्थ्यो । उहाँले ठूलो बहादुरी देखाउनुभएको हो । तर त्यस ठाउँको कमाण्डरको भूमिका निर्वाह गरेको म सई गोपाल शर्माको मानौं त्यहाँ कुनै भूमिका नभएजस्तो गरियो । यसमा मेरो केही गुनासो छ ।
दाङको तुलसीपुर नगरपालिका–३ स्थित अम्बास मतदान केन्द्रमा मेरो कमान्डमा १२ जनाको टोली चुनावी सुरक्षामा खटियो । मतदान स्थल, मतदान अधिकृत, मतपेटिकाको सुरक्षा गर्नु र त्यहाँस्थित आम मतदाताहरुलाई सुरक्षा दिनुपर्ने चुनौतीपूर्ण काम मेरो जिम्मामा थियो ।
आफूले रोजेको र खोजेको जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्न, डर त्रासरहित मतदानस्थल बनाउन र मतदानस्थलसम्म आउने बातावरण बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।
म खटिएको मतदानस्थल सुरक्षाको दृष्टिले अतिसंवेदनशील, बजारदेखि टाढा ग्रामीण भेग र चुनाव बहिष्कारवादी नेकपा विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरुको जमघट र चलखेल हुने ठाउँ भनेर चिनिएको थियो ।
सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र भएकोले म स्वयं आफू पनि चुस्तदुरुस्त र मेरो मातहतका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि चुस्त दुरुस्त, बिना लापरवाही हिसाबले ड्युटीमा खट्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।
त्यसै अनुसार असार १४ गते मतदानस्थल वरपर आफू स्वयं र मातहतका सुरक्षाकर्मीहरुलाई ड्युटीमा परिचालित गरेको थिएँ । त्यसबेला मतदानस्थलको पश्चिम उत्तर क्षेत्रमा प्रहरी हवल्दार दुर्गाबहादुर रानालाई ड्युटीमा खटाएको थिएँ ।
हवल्दार राना खटिएको स्थानमा नचिनेका मान्छेको समूहले चुनावका दिन बिहान साढे ९ बजे सुतली बम प्रहार गरेका थिए । ड्युटीमा तैनाथ हवल्दार रानाको सुरक्षा सतर्कता, चनाखोपन र साहसी कार्य गर्नुभयो । हवल्दार रानाले बमलाई टपक्क टिपेर मान्छेको भीड नभएको ठाउँमा फाल्दा जनधनको क्षति हुन पाएन ।
यो साहसिक कार्यको लागि प्रहरी हवल्दार राना सम्मान र कदरयोग्य अवश्य हुनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका सबैमा उहाँको वाहवाही र प्रशंसा हुनु र उहाँको नाम आउनु स्वभाविक हो ।
तर विडम्बना त्यस क्षेत्रको सुरक्षाको कमाण्डर सम्हालेको मेरो कुनै भूमिका नभएजस्तो देखाउन खोजियो । जबकी त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना हुन पुगेको भए कमाण्डर कस्तो खालको कारबाही हुन्थ्यो होला ? यसको जवाफ कसले दिने ? अन्य सुरक्षाकर्मीले पनि त्यस ठाउँमा सुरक्षा दिएका थिए । उनीहरु सबै गुमनाम ? उनीहरुको भूमिका शून्य थियो त ?
बम समात्ने प्रहरीको सम्मानमा अबिर जात्रा, स्कूले केटाले फालेका थिए बम